Iza No Fivarotana Japoney Misarika Bibikely Betsaka Indrindra? Mpianatra Iray Nanapa-Kevitra Ny Hitady Ny Valiny · Global Voices teny Malagasy
Iza No Fivarotana Japoney Misarika Bibikely Betsaka Indrindra? Mpianatra Iray Nanapa-Kevitra Ny Hitady Ny Valiny
Voadika ny 28 Marsa 2016 9:15 GMT
Vakio amin'ny teny bahasa Indonesia, Español, English
Karazana fivarotana iray ao Japana.Mety ahitana bibikely eto amin'ny manodidina eto. Sary: Wikipedia user Kuha455405 (CC BY-SA 3.0)
Nanamarika ny mpianatra iray ao amin'ny sekoly ambanivohitr'i Japana Prefektioran'i Mie fa mora ny mitady sy misambotra bibikely ao amin'ireo toeram-pivarotana misokatra mandavantaona. Nanapa-kevitra izy noho izany ny hanomboka tetikasa fikarohana an-tsekoly mba hamaritana hoe iza ny fivarotana mivoha mandavantaona mahasarika bibikely betsaka indrindra.
Ary, ao amin'ny Japana tia bibikely, lasa nalaza tao amin'ny media sosialy ilay tetikasa fikarohana ataony.
Iray amin'ireo sary nalaiko ito.Mazava eto hoe iza ny fivarotana tsara indrindra hanangonana bibikely. Manana fampisehoana azy manokana ny Faribolana K.
Amin'i Fundo, tranonkala izay mitatitra vaovao sosialy ao Japana, liana ilay mpianatra hahalala hoe hazavana manao ahoana sy jiro manazava mari-pamantarana trano fivarotana tahaka ny ahoana no manintona bibikely indrindra.
Hitany fa ireo jiro manjelanjelatra miloko manga no nisarika bibikely; manintona bibikely vitsy kokoa noho ny ao anatiny ny ivelan'ny trano tsy dia misy loko manga amin'ny jiro marotsaka mipendrapendrana amin'ireo trano fivarotana mivoha mandavataona.
Namarina ilay mpianatra fa ny famantaran'ny Faribolana K izay manome hazavana manga betsaka kokoa no mahasarika bibikely maro kokoa.
Na dia hoe mety ho toerana tian'ireo bibikely mahasorena tahaka ny kadradraka aza ny toeram-pivarotana, nahatsikaritra ilay mpianatra ao amin'ny lisean'ny perfektioran'i Mie fa bibikely karazany maro, ao ny voangory ary ao ny samoina, no mety ho hita sy azo angonina avokoa.
‘MIAVAKA Ny bibikely eo amin'ny Faribolana K’
Malaza any Japana ny fanangonana ireo bibikely — indrindra fa ireo karazana voangory — izay fialambolin'ny ankizy ao an-trano. Ary zavamisy ao anatin'ny fiainana mandritra ny taona ao Japana ny bibikely. Mafana sady mando ny toetry ny andro anelanelan'ny lohataona sy ny mihintsan-dravina, vokatr'izany mihaohao aoka izany ny bibikely.
Ny marina, maro ny fandraharahana, ao anatin'izany ny toeram-pivarotana mivoha mandavataona, mampiasa herinjiro ultraviolet hiatrehana ireo andiam-bibikely sintonin'ny jiro amin'ny alina.
Narantin'ilay mpianatra tao amin'ny mozean'ny Prefektiora Mie ny vokatry ny fikarohany. Tsikaritr'ilay mpitendry mozika Japoney iray manana ny hoaviny antsoina hoe Mizuka, izay mipetraka amin'ny Perfektiora manodidina ao Aichi ilay tetikasa fikarohana, ary nizara sary vitsivitsy tamin'ireo mpanaraka azy ao amin'ny Twitter izy.
Niparitaka haingana be ilay siokan'i Mizuka.
Nitarika fikarohana mahaliana ny mpianatra lisea iray. Ahoana ny toeram-pivarotana iray no toerana tsara hanangonana bibikely kanefa ny toerana sasany tsia? Nahita bibikely tao amin'ny Faribolana K ilay mpianatra, ary tena maro be tokoa ireo. Nanomboka tamin'izay no nanomezana marika ny Faribolana K ho an'ny Family Mart hoy ilay mpianatra , “Izao no fotoana andehanana any amin'ny Faribolana K hanangonana bibikely!”
Taorian'ny nahafantaran'i Mizuka fa lasa nalaza ilay tetikasa siansa an'ilay mpianatra lisea, dia nanazava kely momba izany fikarohana teknika izany izy.
Maro no namaly ka mino aho fa tsara raha manohy. Nanomboka ny fikarohany tamin'ny fampiasana spektrometatra tsotra sy sivana ultraviolet ilay mpianatra . Mahaliana. Raha te hamantatra bebe kokoa ianao dia hitanao ao amin'ny Mozea Mie (MieMu) ny tetikasa iray manontolo. Mandehana mijery izany!
Spotlight, izay tranonkala mamoaka ny vaovao sosialy ao Japana, dia nahita fa efa fanta-daza elaela ihany lazan'ny bibikelin'ny Faribolana K.
Raha hiverenana ny taona 2014, nahatsikaritra ny mpampiasa Twitter iray fa:
MIAVAKA ny bibikelin'ny Faribolana K
Tsy ny bibikely ihany no voasariky ny jiro manazava ny Faribolana K. Nisy mpiserasera hafa ao amin'ny Twitter efa nahita sahona teo ihany koa tamin'ny taona 2014 :
I thought to myself, “Wow, the Circle K is sure attracting a lot of bugs, but when I took a closer look…. AIEEEEEEEE!!
Efa nieritreritra aho hoe, “Oay, tena manintona biby betsaka ilay Faribolana K , nefa vao nanatona akaiky kokoa aho…. KAAAAY!!
Mila mihetsika haingana ireo sahisahy amin'ny fihazana bibikely raha te-hanangona Faribolana K; hiara-hiasa amin'ny Family Mart ilay toeram-pivarotana amin'ny faran'ny volana martsa 2016, ka hanjavona mandrakizay ilay marika tian'ny bibikely.